(August 29,2016) Madaxda Madasha oo soo fara geliyay loolan u dhaxeeya Faarax C/qaadir iyo Fahad Yaasiin – AKHRISO – Awdal State
HomeWararka Soomalida2(August 29,2016) Madaxda Madasha oo soo fara geliyay loolan u dhaxeeya Faarax C/qaadir iyo Fahad Yaasiin – AKHRISO
(August 29,2016) Madaxda Madasha oo soo fara geliyay loolan u dhaxeeya Faarax C/qaadir iyo Fahad Yaasiin – AKHRISO
August 29, 2016 Wararka Soomalida2
Shir qarsoodi ah oo aan caadi aheyn oo qaar ka mid ah madaxda Madasha Wada-tashiga Qaran ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa looga hadlay is qab qabsiga ka taagan kursiga Xildhibaanimo ee Beesha reer Aw-xasan, iyadoo arrintan aheyd mid maalmihii la soo dhaafay aad looga hadlay hayay Muqdisho.
Shirkan qarsoodiga ah oo ay isugu yimaadeen Madaxweynaha, Guddoomiyaha Baarlamaanka, Ra’iisul Wasaaraha, Madaxweynaha iyo Madaxweynaha Jubbaland ayaa looga hadlay cabsho la sheegay inay ka timid beesha reer Aw Xasan.
Warqad ay heshay Jowhar.com oo uu ku saxiixnaa Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa muujinaya in Madaxda Madasha qaarkood ay isku raaceen in la abuuro oday dhaqameed cusub, kaasoo lagu kordhinayo liiskii 135 oday.
Warqadan ayaa si toos ah ugu socotay Guddoomiyaha Guddiga Hirgelinta doorashooyinka heer Federaal, Guddiga doorashooyinka dowlad goboleedyada, iyadoo lagu ogeysiiyay Madasha Wada-tashiga Qaran, waxaana lagu howl geliyay Oday dhaqameed cusub oo lagu biirinayo liiska 135 oday.
Sida lagu caddeeyay qoraalkan waxaa la kala qaaday soo xulista Kursiga Xildhibaan ee Beesha Reer Aw-Xasan, iyadoo Suldaankii hore uu hoggaamin doono howlaha la xiriira doorashada kursiga Xildhibaanimo ee Beesha reer Aw-Xasan ee Koofur Galbeed.
Halka Nabadoonka cusub ee la howl gelinayo uu hoggaamin doono kursiga Xildhibaan ee Beesha reer Aw-Xasan ka heleyso Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
Arrintan ayaa ka dambeysay markii uu halis galay Kursiga Faarax C/qaadir, iyadoo xubnaha Madasha qaar ay doonayaan inay difaacaan kursigaas, maadaama laga war helay in Suldaankii Beeshaas uu doonayo in Fahad Yaasiin uu siiyo kursiga Xildhibaanimo.
Isku dayo badan oo Faarax C/qaadir ku doonayay inuu ku hantiyo kursiga ayaa guuldareystay, waxaana taasi keentay in Fahad ku xoog badnaado dadka noqon kara ergada, iyadoo halka Odey ee beesha reer Aw-Xasan ugu jirey Odayaasha 135 ah uu diidey inuu saxiixo ergo uu soo qortay Faarax C/qaadir.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa la sheegay inuu door weyn ka qaadanayo arrinta, si uu saaxibkiis ugu difaaco kursiga Xildhibaanimo, waxaana taas keentay in loolanka ka dhashay kursigaas ay oday dhaqameed cusub lagu abuuro.
Hadaba halkan hoose ka akhriso warqad ka soo baxday Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo lagu howl geliyay Nabadoon cusub.
(August 29,2016) Xubin cusub oo lagu kordhiyey odayaasha dhaqanka ee soo xulidoona dhismaha Baarlmaanka cusub
(August 29,2016) Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo difaacay howlgalada ciidamadiisa ka wadaan gudaha Turkiga